Nisy maty tao amin'ny Red Bull Rampage ve? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Mpandresy omby mena - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Mpandresy omby mena - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Nisy maty tao amin'ny Red Bull Rampage ve?
Jordie Lunn avy any Canada no mifaninana mandritra ny lalao famaranana ao amin'nyRampage Mena Mena, fifaninanana fanasana ho an'ny irery sy ilay hetsika bisikileta an-tampon'ny be bisikileta eran'izao tontolo izao amin'ny 26 Oktobra 2018, any Virgin, Utah. LunnMATYAlarobia tamin'ny fianjerana tany Cabo San Lucas, Mexico.
Ny fidirana am-ponja ankehitriny dia zavatra antenaintsika rehetra fa tsy mila ataontsika mihitsy, na firy taona na firy isika. Na dia tsy azoko antoka aza, dia ho fantatry ny zaza 6 taona ny dikan'izany hoe migadra izany fa mifampiraharaha fotsiny.
Ny fampidirana am-ponja dia ratsy dia ratsy, fa alao an-tsaina ny fitomboana any am-ponja, sary an-tsaina hoe 14 taona ianao ary nigadra mandrapahafatiny - nanomboka teo mihitsy aza izany, saingy izany dia eo amin'ny olona maro androany no misy an'io lisitra io. Aza hadino ny manafatra sy misoratra anarana amin'ilay fantsona raha tsy mbola nanao izany ianao, ary raha mbola eo ianao, dia azonao atao ihany koa ny misoratra anarana amin'ny lahatsoratra Hindi 10 ambony ho an'ny doka avo roa amin'ny 10 voalohany, saingy raha tsy mila adim-panazavana dia ireto no ireo 10 voaheloka voaheloka tanora tampoka ary ny endrik'izy ireo ankehitriny. Catherine sy Curtis Fairchild Jones dia manomboka amin'ny isa 10.
Tao Melbourne 1999, i Catherine sy i Curtis, 13 sy 12 taona, no lasa tanora indrindra nenjehina ho olon-dehibe tamin'ny famonoana olona voalohany. Notifirin'izy roa lahy i Sonya, sakaizan-drainy, ary nikasa ny hamono ny rainy sy ny lehilahy iray hafa noho ny fametavetana azy ireo izy ireo. Rehefa notifirin'izy ireo izy, ary tsapany fa hadisoana lehibe no nataony, dia nihazakazaka nankany amin'ny tranon'ny mpifanila trano aminy izy ireo ary nilaza fa lozam-pifamoivoizana.
Na dia hita aza ny porofon'ny fanararaotana dia tsy nisy nanao na inona na inona, tsy nisy nino fa nisy nanolana izy roalahy ary nampidirina am-ponja. Nandritra ny fotoam-pitsarana azy ireo dia tsy nitondra ny fanararaotana mihitsy izy ireo, na inona na inona fijaliana nanjo azy ireo dia tsy voatonona akory, ny tiako holazaina dia ilay lehilahy nanararaotra azy ireo dia voaheloka ho nanao herisetra ara-nofo tamin'ny zanakavavin'ny sakaizany taona maro lasa izay. Fa maninona no tsy nitaiza ny fiarovany io nandritra ny fotoam-pitsarana azy, tsy azoko izany.
Avy eo tsy nahomby ny rafi-pitsarana ary niaiky izy ireo fa mpamono olona ary voaheloka 18 taona sy andrana mandra-pahafatiny. Samy navotsotra izy ireo tamin'ny 2015 tamin'ny taona 29 sy 30. Teo amin'ny toerana fahasivy dia i Atif Rafay sy Sebastian Burns um, fantatro mialoha ity tranga ity satria misy andiam-panadihadiana Netflix tena tsara momba ny heloka bevava isan-karazany antsoina hoe Confession Tapes ary io no tranga voalohany.
Nomena soso-kevitra fatratra, kanefa, tao Bellevue tamin'ny taona 1994, niverina tany amin'ny tranon'ny fianakaviana Atif i Atif sy ny sakaizany Sebastian. Milamina ny zava-drehetra mandra-piverin'ireo zazalahy avy amin'ny alina lava ary hitany fa ny ray aman-drenin'i Atif sy ny rahavaviny dia novonoina tamin-kabibiana tamina trano dia korontana tanteraka. Taorian'ny famonoana azy dia nandova izay rehetra nananan'ny ray aman-dreniny i Atif, nividy fiara vaovao, fiainam-baovao, ary toa tsy nalahelo ny fahafatesan'ny fianakaviany.
Na tany Etazonia na tany Canada, ny polisy dia niahiahy ireo roa lahy lahy namono ny fianakaviany mba hahazoany ny vola. Nanendrikendrika azy tamin'ny vaovao izy ireo toy ny hoe tsy misy rahampitso, nanisy marika azy ho mpamono olona, ​​ary avy eo dia nampiasa ny teknikan'Andriamatoa Big hanery ny hibaboka. Ity teknika ity dia tena tsy ara-dalàna any Etazonia, fa ara-dalàna any Canada, izay nanaovana azy, hampidirana azy amin'ny hetsika tsy ara-dalàna ary avy eo hitondrana izany ho fieken-keloka.
Na dia misy alibis marobe aza ary tsy misy porofo ara-batana, dia nitady an'i Burns hiaiky heloka hatrany ilay polisy manafina ary hataony afaka daholo izany. Mihevitra aho fa amin'ny fanantenana ny hamerenana ny fiainany ho ara-dalàna dia nibaboka izy ary avy eo Atif koa, na dia tsy nitovy mihitsy aza ny tantaran'izy ireo. Samy voaheloka noho ny famonoana olona telo izy ireo tamin'ny 2004 ary samy voaheloka 3 sazy mihatra na dia efa nigadra nandritra ny 20 taona lasa aza i Joshua Smith.
Tamin'ny volana febroary 2012 lasa teo dia niditra an-tsokosoko tao amin'ny efitranon'ny raikeliny Chikos i Joshua Smith ary nangalatra ny basim-borona. Avy hatrany taorian'izay dia nanomboka nitifitra zavatra manodidina ny trano izy, nandositra ny fikorontananany i Chiko sy ny zanany vavy tamin'ny famakiana ny varavarankely sy ny fiakarana. Natiko teo amin'ny sofa ny renin'i Joshua Tamiko Robinson reniny rehefa notifiriny in-12-14 teo ho eo izy.
Ary maninona no nataony izany mety hanontanianao? Satria reniny ny reniny. Marina izany. Nanomboka niaraka tamin'ny vahoaka diso i Joshua te hanatevin-daharana andian-jiolahimboto, mihinana zava-mahadomelina, mihinana pilina, nody an-trano tamin'ny ora mampihomehy izy Ka nomen'i Tamiko fe-potoana fohy ary noteneniny izy mba hijanona tsy hiaraka amin'ireo olona ireo ary izany no nahatonga azy.
Niaiky ny heloka vitany tamin'ny famonoana olona faharoa izy ary higadra 30 ka hatramin'ny 50 taona. Evan Miller no isa anay. Sarotra izao ny fiainan'i Evans, rehefa feno 14 taona izy tamin'ny 2003, dia tao anatin'ny fitsaboana tsy natokana izy satria nokapohan'ny raikeliny ary ny reniny dia nanararaotra zava-mahadomelina sy toaka.
testosterone ambany sakafo matavy
Indray andro dia niara-nipetraka tamin'ny namany sy ny Cannon mpifanila vodirindrina aminy izy, izay sendra iray tamin'ireo mpivarotra rongony reniny koa. Rehefa avy nandany ny ankamaroan'ny alina nisotro sy nifoka ahi-dratsy, Evan sy ny namany dia nanandrana nandroba an'i Cannon taorian'ny nikapohany azy. Nokapohan'i Evan tamin'ny batina baseball izy ary avy eo nodorany tamin'ny afo ilay tranofiaran-tsariny, ary maty izy avy eo noho ny ratra sy fofonaina setroka.
Rehefa notsaraina izy dia notolorana aina hanana fahafahana vonjimaika ny sakaizany raha nijoro ho vavolombelona hanohitra an'i Evan, izay toa nataony izany. Tamin'ny 2006, voaheloka higadra mandra-pahafatiny tsy misy fandoavam-bola i Evan ary ankehitriny, amin'ny faha-28 taonany, dia mety hanana fotoana hiatrika fitsarana indray izy, nefa amin'izao fotoana izao dia mbola any amin'ny fonjan'i Ind. Tamin'ny 1992, rehefa 15 taona i Jacob dia novonoiny ny reniny sy ny raikeliny.
Taorian'ny fanararaotana ara-nofo, ara-batana ary ara-pihetseham-po nandritra ny taona maro, dia nanakarama zatovo zokiny hafa i Jacob mba hanampy azy hamono ny ray aman-dreniny. Avy eo ny marainan'ny 17 desambra, nankany amin'ny efitranony izy ireo, ary saika natory izy ireo ary nanafika azy tamin'ny fomba masiaka isan-karazany nandritra ny 5 minitra. Maty voatsatok’antsy izy ireo, nanondraka maces ny tarehiny, ary nitifitra azy ireo.
Tsy nijoro ho vavolombelona velively izy nandritra ny fotoam-pitsarana voalohany azy satria nilaza ny fiarovany azy fa hanangona entana izy ary handeha raha manandrana izy, ka voaheloka higadra mandra-pahafatiny nefa tsy nahazo fahafahana vonjimaika. Rehefa afaka 25 taona an-tranomaizina dia nahazo famerenana fitsarana indray izy ary zony hijoro ho vavolom-belona tamin'ny volana aogositra 2018. Tonga amin'ny fahadimy i Diana Ortiz.
18 taona i Diana raha nandositra tany New York tamin'ny 1983 mba handositra ny fifandraisana tsy misy herisetra aminy, ary tao no nihaonany tamin'ny sakaizany vaovao, izay roa taona taminy. Nampahafantatra azy tamin'ny zava-mahadomelina toy ny heroinina, LSD, ary cocaine izy ary resy lahatra taminy fa ny fomba tokana hitazonana ny fahazarany roa dia ny milaza fandrobana. Jereo fa tsy vonoan'olona fa fanendahana fotsiny.
Tapitra ny drafitra, mody mpivaro-tena ao amin'ny toeram-piantsonana izy, miandry olona manatona azy, avy eo handroba azy ny sakaizany sy ny namany sasany. Ilay niharam-boina nitondra azy dia nanomboka niady tamin'ireto olana ireto ary raikitra ny fifanolanana ary voatifitra izy. Rehefa nandositra izy rehetra dia tsy azon'izy ireo an-tsaina fa polisy tsy mpiasan'asa ity mpanjifa ity ary maty andro vitsivitsy taty aoriana.
Nitodika tany i Diana ary hita fa meloka tamin'ny famonoana olona ary voaheloka higadra 17 taona mandra-pahafatiny. Rehefa afaka 22,5 taona an-tranomaizina dia nandeha vonjimaika ihany izy.
Amin'ny laharana faha-4 dia i Quantel Lotts. Ankehitriny, i Lotts, toy ny ankizy maro hafa ao amin'ity lisitra ity, dia nanana olana tamin'ny fampiakarana ny da, ny reniny, ny renikeliny, ny dadatoany, ny nenitoany, ny ankamaroan'ny olona manodidina azy dia nanjary mpidoroka kôkainina ary nanjary ambony mihitsy aza rehefa tao amin'ny efitrano. Nahita ny dadatoany nitifitra imbetsaka izy noho ny zava-mahadomelina ary izy tenany nokapohina matetika.
Tamin'ny faha-14 taonany dia voan'ny haza ny fahatezerana ary avy eo amnesia ny zava-nitranga. Tamin'ny taona 1999 dia nilalao tamin'i Michael rahalahiny izy, nanomboka tsy nanan-tsiny toy ny mahazatra izy io. Nandefa zana-tsipika ho any aminy i Michael, nitifitra kilalao tsipìka sy zana-tsipìka i Lotts, saingy avy eo nanjary ratsy tarehy ary lasa ady tena izy.
Niafara tamin'ny fanindronana Lotts an'i Michael in-droa i Lott ary namono azy tamin'ny farany. Tsy tadidiny mihitsy ilay zava-nitranga, tadidiny fotsiny ny nilazana ny ampitson'io fa maty ny rahalahiny ary izy no nahatonga azy, notsaraina izy fa olon-dehibe fa tsy zatovo ary voaheloka higadra mandra-pahafaty . Na dia mieritreritra amin'ny 14 taona ny fanjakan'i Missouri fa mbola tanora loatra ianao ka tsy afaka manambady ara-dalàna, miala amin'ny fianarana, manome ra, fihetsika na dia tsy nahazo alalana avy amin'ny ray aman-dreny aza, saingy efa ampy taona ianao mba hotsaraina ho olon-dehibe ary hihidy mandrakizay.
Ny laharanay 3 dia i John Katehis. Tamin'ny 2009, John, izay 16 tamin'io fotoana io, dia nanao doka tao amin'ny Craigslist nanolotra serivisy ara-nofo hanaovana vola ara-nofo, ary ilay mpanao gazety malaza any amin'ny faritra George George Weber dia namaly ny doka nataony. Rehefa nifankahita tamin'ny daty kinky izy ireo tamin'ny farany, raha azonao antsoina izany dia nilaza i John fa nanatsoaka antsy azy i George ary nanindrona an-tsokosoko an'i George in-50 hiaro tena ary sempotra rehefa nitranga izany, ka tsy haiko mihitsy ny momba azy. mamoaka antsy.
Ary raha tena fiarovan-tena izy io, maninona no in-50, azo antoka fa nisy olona aorian'ny vitsivitsy mety maty na farafaharatsiny naratra mba hialana amin'ilay toe-javatra. Izy dia azo jerena ara-bakiteny mipoaka sy mitsiky mandritra ny fandrenesana sy ny fiaiken-keloka nataony. Tamin'ny 18 taona dia hita fa meloka i John ary voaheloka higadra 25 taona mandra-pahafatiny, ary mbola ao amin'izany ihany izy amin'izao fotoana izao.
Eo amin'ny laharana faharoa kosa i Ashley Jones. Ashle dia zanaka iray notezain'ny ray aman-dreny manana olana. Nametaveta azy ny raikeliny ary mpidoroka zava-mahadomelina ny reniny, ka toa fitahiana izany rehefa nanaiky ny hampiditra azy sy ny rahavaviny ny raibeny.
yoga ho an'ny abs
Tsy fantatro raha nanaiky handray azy ireo izy ireo na voaroaka ny ray aman-dreniny hatramin'ny nanatsatohany antsy ny rainy sy ny reniny bevohoka tamin'ny 1998, fa tsy maty izy roa. Herintaona taty aoriana, rehefa feno 14 taona izy, dia nanjary mpankato bebe kokoa ny raibeny sy renibeny ary niaraka tamina zazalahy iray izay tsy nankasitrahany, mpivady sandoka ary nanampy ny sipany hanao famonoana olona maromaro izy. Novonoin'izy ireo aloha ny raibeny, notifiriny ny tavany indroa ary avy eo notsatohany antsy ho faty, avy eo ny nenitoany izay nitifitra azy ireo tamin'ny torimasony ary avy eo nandoro azy roa, dia nanafika ny renibeny koa, izay may ihany koa teo amin'ny tarehiny, teo amin'ny tratrany ary notsatohany antsy sy voatifitra teo amin'ny soroka i Jaw.
Soa ihany fa tafavoaka velona izy. Niezaka namono ny rahavaviny 10 taona ihany koa izy tamin'ny fanindronana antsy azy in-14, saingy tafavoaka velona ihany izy. Misaotra AN'ANDRIAMANITRA.
Ankehitriny amin'ny faha-24 taonany, dia mbola any am-ponja izy, ary mamita ny saziny mandra-pahafatiny. Ary farany tamin'ny laharana 1 Erin Caffey. Tamin'ny volana martsa 2008 dia nanomboka niaraka tamin'ny zazalahy iray antsoina hoe Charlie Wilkinson i Erin.
Toa kosher ihany ny tantara hatreto. Taorian'ny fihaonana tamin'i Charlie dia nahatsapa ny ray aman-dreniny fa misy zavatra momba azy, saingy tsy natahotra izy ireo, fa nanomboka niova i Erin, niova ny fahalianany, niova ny fihetsiny. Nihevitra ny ray aman-dreniny fa nisy fiantraikany ratsy tamin'i Charlie izy ireo ary naniry ny hisarahan'izy ireo.
Ka inona no ataon'ny tanora mamoy fo amin'izao toe-javatra izao? Charlie sy ny namany Waid dia nankany an-tranon'i Erin raha mbola niandry tao anaty fiara niaraka tamin'ny sakaizany Waid izy ireo ary nitifitra an'i Penny renin'i Erin raha saika notapahin'izy ireo tamin'ny katana koa izy ireo. Avy eo dia notifirin'izy ireo ny lohan'i Matthew, zandriny faralahy, ary i James sy ny namany kosa dia samy nifandimby ary nanindrona antsy an'i Tyler rahalahiny hafa. Toy ny hoe tsy dia ratsy loatra izany, nodoran'izy ireo ny trano ary potika tanteraka.
Naratra mafy ny rain'i Erin, notifirin'izy ireo in-11 teo am-pamonoana an'i Penny saingy soa ihany fa tafavoaka velona izy ary tafavoaka ny trano talohan'ny niakarany tanteraka. Midika izany fa tsara vintana izany, raha jerena fa tafavoaka velona tamin'ny vady aman-janany izy ary ny zanany sisa tavela dia any am-ponja. Samy nilaza izy ireo fa ny famonoana dia hevitr'i Erin.
Tamin'ny faha-17 taonany dia niaiky ny helony tamin'ny famonoana olona i Erin, toa an'i Charlie, ary nahazo sazy mihantona 2 miampy 25 taona. Ary izany no ho an'ny olona lahatsoratra anio! Rehefa avy namaky momba ireo tranga rehetra ireo aho dia nahatsapa fa tsy mamela ny heloky ny rafi-pitsarana amin'ny fomba ofisialy ho an'ireo izay mendrika higadra mandra-pahafatiny, nefa manana fahatsapana aho fa rehefa tanora ity olona ity dia mety hahazo karama faharoa arakaraka izay vitanao. Tena mahavariana ianao raha mbola tanora dia sarotra ny mametraka ny marmara hidina sy hidina Ho toy ny loza ateraky ny fiaraha-monina ianao ary tsy hiova mihitsy.
Fiainana an-tranomaizina. Inona ny hevitrao? Ampahafantaro ahy amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany, satria ho mpampiantrano anao Ayman Hasan aho ary ho hitako amin'ny manaraka.
Iza no nahazo ny Redbull Rampage voalohany?
Tsy te-hahazo azy ireo aho ary toy ny hoe mihalehibe aho dia handeha haingana ary hanao tetika ary manantena aho fa afaka manangona azy io ary mahazo izay tadiaviko, ny alakamisy alina talohan'ny famonoana olona, ​​ary mbola Tom manana fahaizana kely hatao amin'ny andro farany alohan'ny hahafeno fepetra dia tsy maintsy hihaona amin'ny zava-drehetra androany aho dia ho andro mampatahotra tsy misy toerana hanodikodinana zavatra ilainao fotsiny ny hahafantatra ny zava-drehetra ary avy eo ianao midina eto ary ny zavatra mihalehibe sy mihalehibe noho ny fanazaran-tenanao nandritra ny androm-piainany fa mitarika amin'ny elanelaky ny lohasaha 73 metatra izay tsy maintsy tratran'ireo mpitaingina tsirairay avy. Izahay dia nanamboatra ny enema ho an'ny lohasaha eo an-tampony ary tokony ho talohan'izay aza izy afaka mandeha any, ry sakaiza, tsy nandresy ianao, ataovy ny zavatra mitovy dia lasa izy ireo oh ilay farany namely fotsiny nilatsaka teo alohan'ny can azonao, izay ny ahiahiko indrindra, ka izao sisa no hataoko dia ny hianjera amin'ny lohasaha ary eo amin'ny farany ambany aho mandritra ny taona faharoa misesy Tom Guinea Pig dia nandrakotra ny banga lehibe indrindra teo amin'ny track Oh super chill Avy eo ampiasao ilay zavatra na zavatra izay tena maharary ny soroko isaky ny misy fiatraikany mafy mandratra ahy fa tsy maintsy manana borosy malama tsy misy safidy amin'ny sombin-tsarimihetsika farany Tonga ny fotoana hividianana ny zoma, amin'ity taona ity dia tena kely tokoa mitebiteby kokoa Noho ny vonona ny soroko sy ny tena marina, eny, faly fotsiny aho fa eto ary mitondra izay mitranga amin'ny fiandohan'ny vanim-potoana. Tanjona tsotra no tanjon'i Tom mba hamenoana ny fahazoan-dàlana hiatrika ny 25 amin'ireo mpamily tsara indrindra eran-tany ho an'ny toerana 10 sy ny famaranana manjavozavo dia azonao atao ny mampatahotra izany tanjona izany amin'ny fahazoana olona ahy ny manaraka dia ho toy izany ny fahatsapana tsara ho any ambany renao izaho tena tsara ny hahatratra ny farany fihazakazahana voalohany manantena fa ampy izay hahatonga ahy any amin'ny famaranana ny hazakazaka voalohany nataon'i Tom dia nametraka izany eo amin'ny toerana voalohany saingy mbola hisy mpitaingina ambony maro hafa hanao izany ary manantena aho fa afaka manao toy izany koa, Board ny mpamaky mihazakazaka mahita an'i Amanda mametaka an'i Tom aloha ho any amin'ny lalana faharoa 31 Agassittler Trouble Day dia toa handeha an-tongotra eto mandritra ny minitra iray izay tsy dia fahita firy intsony ireo bara fa tonga ny fotoana ahazoana mihazakazaka 2, na dia samy Tom sy Natoky tanteraka i Brett fa hitondra azy ireo amin'ny famaranana ny valiny.
Ireo mpitaingin-tsoavaly hafa dia nandao ny efitrano fanatsarana tamin'ny voalohany dia amin'ny andro fantatsika fa mety misy rivotra mitsangana izao dia eto ary ny faran'izay miharihary eo an-tampon'ny havoana dia tsy tena nisaina izany rehefa nanamboatra ny laharako aho eo afovoan'ny fihodinana faharoa dia misy oram-baratra manakaiky ny fiparitahan'ny fepetra roa noho ny antony fiarovana ary manantena izy ireo fa afaka manohy amin'ny Andron'ny loholona fa ny faminaniana dia toa lavitra ny idealy, ny tiako hatao fotsiny dia mahafeno fepetra ary mpihazakazaka aho izao. Manantena aho fa mety hitsabaka ny tovolahy hafa, ny tovolahy toa an'i Aggie ihany no afaka miditra amin'ny lalao famaranana Eggie no manana ny laharana farany adala indrindra, raha mahavita hatramin'ny farany izy dia ho avy aloha, izay hampandeha ny andro amin'ny asabotsy dia toy ny exp ect ary ny mpamily tsy afaka manao na inona na inona fa miandry ny natiora reny. Izaho aza tsy maintsy manao fanazaran-tena be loatra amin'ny làlana na amin'ny andalana ataoko na amin'izay mety ho avy rehefa avy ny orana, fa eh, tonga daholo aho ary mivoaka sy vonona fotsiny, raha tsy maintsy mipetraka eo ambony kitapo isika, izany no fandehany 2014 Ny kalitaon'ny famolavolana Sagebrush nolokoina manokana dia heveriko fa nahemotra aho rahampitso, betsaka ny mpitaingina mijery tsara any, manantena aho fa afaka mahazo ny fihazakazahany i Aggie fa mila mihazakazaka fotsiny izy ary ho ao anatin'ny roa farany amin'ireo dingana mendrika. tohizo fa nahazo fotoana faharoa teto ka alao isaina ny countdown satria hitako ny lalana any ambadika any ary haharitra aho ary hitako ny olona mihazakazaka manatona ahy alohan'ny hahatongavako amin'ny tsipika fahatongavana ary izaho no voalohany voalohany mitomany am-pitomaniana ary te hanao korontana fotsiny ny olon-drehetra, saingy nandalo ny lalao famaranana fotsiny aho tonga soa tamin'ny famaranana, ok fa tiako ho azo antoka fa salama daholo ary mifaninana ihany koa.
Antsoy ny volonao Tom dia tonga eto mba handraisan'ny mpamaky inks handehanana ny Aggies eto ka ny halina hariva dia nieritreritra aho fa hanao fanazaran-tena kely kokoa ary nanodina ny làlana io ary lasa ambony loatra aho ka nilatsaka ny MCL ahy. ary noho izany dia miala amin'ity fialantsasatra iray ity aho. Faly fotsiny aho fa nahazo ny fihazakazahana faharoa omaly ka inona no nisy ary ho lasa 94 satria ny volana Aogositra II no handray ny laharana voalohany amin'ny lalao manasa-dalana. Jereo daholo ny zazalahy vao avy nidina salama ary nanao ny hazakazaka ary mitady anao ry zareo, jereo ny seho, tonga ny fotoana farany ho an'ny famaranana, ny fiofanana herintaona dia hahena ho roa fihazakazahana, mitaintaina toy ny hatahotra foana, enga anie isika ' hanana fiadanan-tsaina aho ary azoko atao hatramin'ny farany ity zavatra ity, andro lehibe io ary hammeryeah mirary soa aho, manomboka ao anatin'ny dimy minitra ary vao nanoratra kely fotsiny tamin'ity maraina ity, tsy misy rivotra be akory toa maloto tanteraka alefanao fotsiny mihazakazaka laharana voalohany izy satria Steenburgen amin'ny làlana ho an'ny filatsahan-jaza lehibe dia voaomana oh izany dia mitete be dia be hatrany rehefa mandeha any amin'ny lohataona izy, ny teny dia tsy afaka mamaritra ny hamafin'ny tetika kely fotsiny fa fahadisoana kely fotsiny hanaovana an'io , ho mora izany, hianjera mafy fotsiny ianao, faly mihazakazaka izao, tsy mahita izany manakorontana 9/9 na dia samy manana saribakoly guinea pig aza i Tom sy i Andrea Kyle dia mizaha toetra ny tongony 73 azo antoka ny fihazakazahany voalohany dia eo amin'ny laharana fahatelo aho, ho hitantsika fa mila manadio ny fihazakazahana aho ary aorian'izay dia avelako nk, manala ahy fotsiny aho azoko lazaina fa te hidina amin'ny tany fotsiny aho ary hisakafo maraina tsara mandritra ny iray andro dia tsy mbola izy ny andro ary tsy anisan'ny nofinofy mamela ny fihazakazahana voalohany ho an'ny marika maharitra maharitra Ankehitriny dia manana hafainganam-pandeha be izy hikosehana hatramin'ny zazakely 360big mifandray amin'ilay blazer eto ary toy ny hoe hataoko lehibe io dia handeha haingana aho dia hanao trigg ary manantena aho fa afaka mametraka azy io ary manao fampisehoana ary alaivo izay notadiaviko tany Lokhande izay nilatsaka tamin'ny làlana iray izay niresahanay momba azy Kenneth, efa lehibe ity lehilahy ity na mety hiafara any amin'ny biraon'ny dokotera izy ary mampifandray tsara anao miteny ianao lefitra dia mitafy izany hatrany amin'ny zazakely inona no eritreretin'ny 25 taona avy any Barcelona Espaniola milamina tsara amin'ny lalana Lokhande dia nambarany mazava tsara fa tsy te-hamarana azy izy satria tsy te-hamita ny fahatelo izy dia maniry ny fandresena eto Bailey ho an'ny mpanoratra Tamil ary izaho fantaro, mahafaly, hadinoy izany, olona ambony noho ny tsipika marary indrindra hitako tamin'io andro io rehefa ny tenako dia nijery, nianjera tamin'io fanompoana mitsangana io, ka 89 tany andrefana faharoa dia hitazona 89, dimy izy, hijanona eo amin'ny laharana faharoa izy fa avelao izy handre anao Cameron tohiny Morgana izao dia mipetraka amin'ny 80 5.50 izy izao izy amin'ny top 5.
Azonao atao ny mahita ny fanetsiketsehana azy kely any, fa tsy voakorontana. Mbola manafika 89 hatrany hatrany amin'ny toerana fahatelo ho an'i Kyle izy, izany no toeran'ny lampihazo, mipetraha ary atsangano ny tenanao, ireo teny izay tsy havoakan'i G, voalohany indrindra, te hahita izay mampatahotra an'i Brandon, izany hoe tsy ilay bandy tianao ho hita etsy ambony akory, maka aina kely fotsiny dia avelao hianjera eto ianao manaparitaka ranomandry goavambe ary sintomy ny backerbig 360 averina mihintsana ny ta footer fa ataovy izy ireo fa tsy mahandro tsara araka ny tokony ho izy izy ireo dia ampy daholo ny momba an'i Lokhande mandondona azy ao amin'ny dimy amby sivifolo point two five ka inona ny drafitrao henonao ny isa rehefa maheno ny isa aho ary izaho no voalohany, midina izy ka andraso ny isa izay ao anatin'ny dimy sivy amby valopolo amin'ny fahatelo Tonga ny toerana. Halanao ity iray eto ity, ary nidina tany ambany izy mba tsy haka gony ka amin'ny telo i Allah Gandhi dia tonga eo amin'ny seza mafana misy azy eto izay no tanjoko tamin'ity taona ity fa tsara ihany raha farany ho any amin'ny farany faly aho ary ny zavatra hafa rehetra dia bonus fotsiny tom dia mahafeno fepetra efa nasehony an'izao tontolo izao fa mihoatra ny faniriana tonga izy dia coo lum mba hijery ny fomba fanamboarany ny andalana, mitaingina azy ary mitaingina azy toy ny Nanjary tsy hita teto i mankyle ka eritreretiko fa manentana ny saina fa nanam-bintana aho namerina azy teto noho ny fahavaloko fahasivy izay tsy nataon'ny olon-kafa, miaraka amin'ireo labiera Suck tsara tarehy roa hafa hampidina anao ary Andre dia teo amin'ny toerana nialany. Te hitandrina azy fotsiny aho zazalahy, nataoko toy ny fiantombohan'ny làlana vaovao iray ity izay tena tianay hotananana ary mandeha foana be izy io, misy fipoahana iray hafa koa ao amin'ireo boky tantara tamin'ity Red BullRampageyouyou ity
Hisy Red Bull Rampage 2020 ve?
Ny zoma dia i Kurt Sorge avy any Canada no lasaVOALOHANYtelo andrompandresy amin'ny Red Bull Rampageamin'ny fandatsahana 92.66 ao aminyVOALOHANYmihazakazaka. Araka ny nambarany taorian'ny fandresena tamin'ny fanambarana an-gazety avy anyRed Bull, Moana aho. Tsy mino aho.
Red Bull Hardline no mpihaino ahy, iray amin'ireo hazakazaka midina ambany indrindra eto an-tany. Ity taranja ity dia manana ny zava-drehetra manomboka amin'ny fitsambikinana lehibe ka hatramin'ny fizarana mihanjahanja. Ho hitako ny halehiben'ireto zavatra ireto sy ny hafainganan'ny famelezana ireo jumps goavambe ireo, koa ampidiro amina isa ny laharam-pahamehiko Red Bull. (Mozika rock mafy) (mozika piano miakatra) - mackerel masina sy masina! Izany zavatra izany, tsy miteny aho.
Goavana tokoa ity zavatra ity, antsoina hoe Cannonand izy io, azo antoka fa mandroaka anao hiala amin'ny ala mainty, midina amin'io làlambe io izay heveriko fa hadalana ny hafainganam-pandehany, tena gaga aho fa lehibe tokoa io zavatra io, izany dia izy. aiza ilay izy? Eny, toerana mamy any, any no hiafaran'ireo tovolahy.
Ary hiverina miaraka amin'ny valiny tsy ho ela aho. Wow, saika lany kasety aho. (mihomehy) Rehefa heverinao fa tsy maintsy mivoaka avy hatrany amin'ny fiatoana ianao amin'ity faritra mivalona ity, 57 metatra! Be dia be ity, misy ny rivotra, ka tsy maintsy mandeha haingana ianao mba hanidiana izany banga izany. (mozika piano faly) Eny teknika kely ity fidinana ity.
Tena goavambe izy io, saingy fidinana miadana kosa ianao, fantatrao fa tsy fidinana hafainganam-pandeha avo lenta izany, rehefa mandeha haingana ianao dia miantsona ary ny tanjonao rehetra dia atosika hamaky ny bisikileta ary hipetraka amin'ny toerana itsoahanao haavony avo toa an'ity ary ny tany sy ny zavatra rehetra dia mandalo ny vatanao. Ny fanontaniana dia hoe ohatrinona lehibe io fidinana io? Ka ho hitako izay betsaka ary alefako eto izy ireo, marina, toy izany koa ny haavon'ny toerana hiainganao, izany hoe 11 metatra, omeo na alao, 2 metatra eo amboniny, ka 13 metatra mankany amin'ilay toerana mamy amin'ity iray ity Mitete. Mitete be dia be izy io, karazana tsy dia lavitra loatra.
Mety handeha tongotra valo metatra ianao. (Fifalian'ny piano) Marina, tsy lehibe noho io fidinana io mankany amin'ilay dingana lehibe avy any ambony izay nojerentsika fotsiny, fa ny zava-drehetra dia lehibe eo amin'ity taranja ity, tsy misy zavatra kely eto. Ka hiezaka aho hametraka izany amin'ny fomba fijery.
Ity dia dingana lehibe iray mankany amin'ny berm lehibe iray, midina dingana lehibe midina ilay berm, hiantso an'i Steve aho, hanampy ahy izy, hitazona izany faran'ny kasety izany izy. Okay, Steve, iray amin'ireo marshals amin'ity fizarana ity. Hidina any aho haka ny tarehimarika. (Tape squeaks) Mety misy teboka mamy aho. 45 metatra! (Fifaliana avy amin'ny piano) Marina, misy sakana vitsivitsy ikalana mivoaka amin'ny hazakazaka.
Indrindra ity iray ity, eny, izany no fiakarana goavambe, ary tena faly aho mahita ny hafaingan'ny hafaingany, ary mety manontany tena ianao hoe faingana tokoa ianao no tokony hanao an'io hitsambikina io, manana ny iray amin'ireo masinina kely ireo aho eto mampiseho ny hafainganan'ny faingam-pandeha vitanao dia mahazo torolàlana hafainganana momba ny hafainganana ianao raha haingana dia haingana no hamelezana izany. Ary aorian'izany dia homeko tarehimarika vitsivitsy ianao, apetraho amin'ny fomba fijery io zavatra io, lehibe inona, mandra-pahoviana? hatraiza ny halehiben'ny zava-kendrenao. Wow, 40, antonony izany.
ny fomba hampitomboana ny fivezivezena
Ny tiako holazaina dia ny fanaovana azy 40, 41, tena tsara izany. Nisy lakilasy lehibe mihoatra ny 41, ka ny taloha - andao hanao izany. (Mihoby ny vahoaka) Ohh, andao ary! Jereo izany, miverina, 40.
Izany no hafainganam-pandeha handray an'io mitsambikina io. Haingam-pandeha izany, indrindra amin'ny bisikilety an-tendrombohitra, ka dia nampidiriko io, napetako ny fantsom-peo, ary horefesiko ny halavan'ny fitsambikinana rehetra satria goavambe. Ka andao ary. (Tape squeaks) 45 metatra.
Saingy 11 metatra miala ny tany io mpandeha kicker io. Niakatra ianao, mety ho 8 metatra, ary avy eo manana an'ity cas ity ianao. Noho izany, satria manana takelaka fisaka misy tongotra 6 ianao, pad misy tongotra 7, alohan'ny hahatongavanao amin'ny toerana mamy dia be ny lesoka - be ny toerana ho an'ny hadisoana raha tsy manana ny hafainganana ianao rehefa tonga any amin'ny 38 mph azonao ampiasaina ity pad case ity. (mozika falifaly) Ity no lalana mankany amin'ny toerana tiako hiantsoana ny endrika Hollywood an'ny Red Bull Hardline.
Fa hiezaka ny handrefy izany araka izay azo atao aho. Ka ny hataoko dia apetraka amin'ny sisiny. Eny ary, hofeheziko eto fotsiny io ary ho hitako ara-bakiteny, Sayonara! (fihomehezana mihomehy) Sayonara a! Eny ary, marina eo amin'io sehatra io dia 20 metatra Manampy 6 metatra hafa ka 26 metatra avy eo ambony ka hatrany amin'ny arabe.
Saingy avy eo ny làlan'ny mpamily mandeha mamaky ny rivotra (kasety) dia toa sahabo ho 3 metatra eo ambanin'ny toerana mamy izy rehetra. Sahabo ho 55 metatra avy eo ambony avy eo, mankany, wow! (mozika piano upbeat) Marina, ity no sakana farany amin'ity taranja ity, ary fitsambikinana lava sy sarotra be izy io. Mivoaka io fihodinan'ny ahitra io ianao, somary mivoaka ny trano kely, saingy mila mitazona izany hafainganana izany ianao handresena tanteraka ity fitsambikinana rehetra ity.
Haingam-pandeha izy io, ka hatramin'ny toerana mamy ka hatramin'ny toerana mamy, dia refesiko ary homeko topy maso ny halehiben'ilay zavatra, ka esory eto ny fatran'ny fantsona. (Tape squeaks) Ataoko fa eo ilay toerana mamy, fa mitsambikina. Okay. 50 metatra - 52 metatra, heveriko fa tsy te hiafara amin'ny tampony ianao, ka 52 metatra miala eo.
Oay! Ka tohizo, Mazava ho azy fa Red Bull Hardline misy isa vitsivitsy natsipiko tao an-tsaiko fa nomeko anao ny fahalalanao bebe kokoa momba ny halehiben'ireto zavatra ireto sy ny hafirianao handeha hamely ireo vato misakana ireo eny amin'ity làlana ity. Fa raha te-hijery lahatsoratra iray hafa ianao dia tsindrio eto raha handresy amin'ny bisikileta nandresy tamin'ny taona lasa, Burnacha, ary raha te-hahita lahatsoratra mahafinaritra hafa ianao dia tsindrio eto ho an'Andriamatoa Martyn Ashton izay manaparitaka an'i Whistler, izany dia horonan-tsary tsy mendrika. Manoratra anarana ianao ary mahazo lahatsoratra toa an'ity iray isan'andro isan'andro amin'ny herinandro.
Ary aza adino raha tianao ity lahatsoratra ity dia omeo ankihibe toy izany.
Iza no nanomboka ny Red Bull Rampage?
Androany,Red Bullnanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fanafoanana ny2020 Red Bull Rampage, fifaninanana freeride voalohany eran'izao tontolo izao, noho ny fanamby natolotry ny Covid-19. Ankehitriny, isika 'llantenaina fatratra ny antsipirian'ny fanontana 2021, rehefa Virgin, Utahdiaantenaina indray lasa ivon'ny tontolon'ny bisikileta an-tendrombohitra.
Iza no maty tamin'ny Red Bull?
Cory Terry, 33 taonaMATYrehefaizynisotro aRed Bullfotoana fohy taorian'ny nilalaovana baskety. Mitory ny fianakavianyRed Bulldolara 18 tapitrisa.
Ohatrinona no azon'ny mpandresy amin'ny Red Bull Rampage?
Vola loka: $ 100,000.
Aiza no misy Redbull Rampage?
RampageNahazonataoakaikin'ny tanàna kelin'i Virgin ao Utah, fa ny tendrombohitra nanatanterahana ny hetsika dia novana matetika isaky ny taona vitsivitsy. Ity dia ny hanomezana ireo mpitaingina lamba lamba banga hanombohana ary hamorona tsipika vaovao tsy misy na inona na inona.24.10.2020
Misy ve ny Red Bull Rampage amin'ny 2021?
Rampage Mena MenaMiverina ao2021ary mankalaza ny tsingerintaona faha-20. Ny fifaninanana bisikileta an-tampon'ny tendrombohitra freeride eran-tany dia natao amin'ny 15 Oktobra, Southwest, Utah (29 Jona,2021)Red Bullfaly erỳ manambara ny fiverenan'ny hetsika freeride lehibe-tendrombohitra voalohany amin'ny fanatanjahantena -Rampage Mena Mena.06.29.2021
Ohatrinona no azonao amin'ny fandresena ny Red Bull Rampage?
Iza no nandresy tamin'ny Red Bull Rampage 2018?
Mpandresy Red Bull Rampage 2018 Brett Rheeder dia niverina tany amin'ny Virjiny tapa-kevitra ny hijoro eo an-tampon'ny lampihazo indray ho mpandresy voalohany eo amin'ny tantaran'ny hetsika.
Impiry i Brandon Semenuk no nandresy tamin'ny Red Bull Rampage?
Ity no fanintelony nandresen'i Semenuk Red Bull Rampage, taorian'ny fandreseny tamin'ny 2008 sy 2016. Izy irery no olona faharoa tamin'ny tantara nandresy intelo tao amin'ny Red Bull Rampage, niaraka tamin'i Kurt Sorge, izay voalohany nahatanteraka izany zava-bita izany. .
Inona no momba ny Red Bull Rampage tamin'ity taona ity?
Ho an'ny ankamaroan'ireo atleta nifaninana tamin'ity toerana ity tamin'ny 2018, ny Red Bull Rampage tamin'ity taona ity dia ny hanohy hiasa amin'ny tsipika nesorin'izy ireo ny tendrombohitra tamin'ny taon-dasa. Ho an'ireo rookie sy ireo vaovao eo amin'ny toerana dia tsy maintsy notampenana, na nifampiraharaha tamin'ny mpitaingina hizara andalana efa misy.